Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle kakhulu eParque dos Poderes - I-Airbnb
Iflethi okanye indlu ekwicomplex entle kakhulu eParque dos Poderes
Jardim Veraneio, Mato Grosso do Sul, Brazil
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguHaroldo
Molo... indawo yam yiflethi okanye indlu ekwicomplex entle eyi-72 m2, ekwindawo ebiyelweyo. Ininzi kakhulu, ikhuselekile, itofotofo ibe inazo zonke izinto ezifunekayo ukuze uhlale kamnandi eCampo Grande/eFlethini inamagumbi okulala ayi-3, kwaye 1 ligumbi elinomnyango ophumela ngaphandle. Inegumbi lokuhlambela, ikhitshi, indawo yokuhlamba iimpahla enomatshini wokuhlamba impahla, ifriji, isitovu, umatshini wokwenza ikofu, umatshini okhupha umoya obandayo okanye oshushu (onke amagumbi kunye negumbi lokuhlala linomoya), iifeni eziyi-2 ezisesilingini (1 kwigumbi lokuhlala kunye nenye ekwigumbi lokulala), hluza ngamanzi omkhenkce, i-Intanethi i-Wi-Fi optic ye-200MB/s (ukusetyenziswa ngokukhethekileyo kweflethi okanye indlu ekwicomplex engasetyenziswa nangabanye abantu), i-microwave ioveni, umatshini wokwenza i-sandwich, igumbi lokuhlala elinetafile yokutyela, isofa etofotofo kakhulu, i-Smart TV 55 inches 4k kunye neNetflix, iayini, njl njl. Zonke ezintsha!
Ndinamashiti ebhedi, iitawuli nezinto zehotele ezine-shampoo, i-conditioner nesepha. Nantoni na eyenza ubomi beendwendwe bube lula. =D
Inegaraji eyi-1 yabucala negqunyiweyo, kunye nokubeka iimoto ezongezelelweyo ngaphakathi kweflethi okanye indlu ekwicomplex ngokwayo.
Le ndawo iphambi kwe-AABB (kule ndawo, kukho ivenkile yokutyela eyenza ukutya okwenziwe yonke imihla), ecaleni kwe-Odara Buffet, iimitha ezimbalwa ukusuka kwiiBhodi Zonyango kunye neDentistry, i-Uniderp I-Agrárias, iOfisi kaRhulumente, iNkundla Yobulungisa, iTre, ubulungisa belizwe, i-Acadepol yamapolisa asekuhlaleni, iGeneral of the Military Police, iFederal Revenue Service, iiState Secretariats, phakathi kwezinye iiarhente zikawonke-wonke ezikwipaki yombane.
Ilungele abo baza kuqhuba izifundo zamapolisa okanye kwezinye iindawo zikawonke-wonke.
Ukongezelela, le ndawo ivumela ukufikelela ngokukhawuleza nangokulula embindini wesixeko, kwiivenkile ezinkulu iCampo Grande kunye neBosque dos Ipês. Indawo eyenziwe ngamaplanga nekhuselekileyo, ilungele abantu abangaphandle. Ukwaneliseka nokuhlala kamnandi kuqinisekisiwe. Ngoxa undwendwe lusendlini, siza kukunika inkxaso yonke. Ndiyathemba ukuba!
Phawula1: Amagumbi ane-shutters, apho, xa evuliwe, aphandle kwaye, xa evaliwe, amagumbi amnyama kakhulu, njengoko kunokubonwa kwiifoto ezibonisa iflethi okanye indlu ekwicomplex phandle.
Phawula2: Iindwendwe ezongezelelekileyo zamkelekile, ukuba nje zaziswe kakuhle kwindawo eboniswe ngexesha lokubhukisha.
Phawula3: Andiyenzi imali engenayo nephumayo ngaphandle kwe-app.
Iindwendwe ziya kuba nokufikelela kulo lonke igumbi.
Xa uthumela iflethi okanye indlu ekwicomplex kukho ivenkile yokutyela enesidlo esiphekwa ekhaya neshibhile.
Umbuki zindwendwe ngu- Haroldo
Uma pessoa de bem com a vida... =D
Ndifumaneka xa ndincedwa okanye ndinemibuzo.
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Jardim Veraneio